Shiinaha Shiinaha soo saaraha 19 inch rack kordhaya 48V 50Ah lithium ion batteri (LiFePO4) oo loogu talagalay soo saaraha isgaarsiinta iyo alaab-qeybiye | LIAO
1. 19ka rakiid ee rakibida 48V 50Ah LiFePO4 baakid batari nidaamyada keydinta tamarta qoraxda.
Qaabka Lambar Rebak-F4850T
Awoodda magaca 50Ah
Miisaanka Qiyaastii 30kg
Cabbir 440mm * 320mm * 133mm
Codsiga Si gaar ah loogu talagalay saldhigga isgaarsiinta saldhigga, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa tamarta Awoodda, qoraxda＆nidaamyada dabaysha, keydinta tamarta guriga, UPS, iwm.
3. Badbaadinta sare: Ku dhowaad nooca batari lithium ee ugu ammaansan ee laga aqoonsan yahay warshadaha.
4. Iyada oo la adeegsanayo qalabka isgaarsiinta ee RS232 ama RS485.
5. Hawlaha isbarbar yaaca: wuxuu noqon karaa mid is barbar socda si loo weyneeyo awoodda.
6. Wax saameyn ah oo xusuusta ah kuma yeelan, cufnaanta tamarta sare, oo leh tilmaame SOC.
Hordhaca Nidaamka Solar Energy (Awood)
Nidaamka soo saarista tamarta qorraxda wuxuu ka kooban yahay baakado qorraxda ku shaqeeya, ilaaliyayaasha qoraxda, iyo baytariyada (kooxo). Haddii aad rabto awoodda soo saarida ee nidaamka tamarta qorraxda inay noqoto AC 220V ama 110V, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad jaangooyo qalabka wax beddela.
Nidaamyada dhalinta tamarta qoraxda waxaa loo qaybiyaa nidaamyada dhalinta tamarta ka baxsan, nidaamyada dhalinta korontada ku xiran iyo nidaamyada dhalinta tamarta ee loo qaybiyay
1. Nidaamka abuurista korontada ee ka baxsan shabakadda wuxuu inta badan ka kooban yahay qaybaha unugyada qorraxda, kontoroolayaasha, iyo baytariyada. Haddii awoodda wax soo saarku ay tahay AC 220V ama 110V, inverter ayaa sidoo kale loo baahan yahay.
2. Nidaamka dhalinta korontada ee ku xiran sheyga waxaa loola jeedaa in kan tooska ah ee ay soo saaraan modules-ka qoraxda loo badalayo mid kale oo isbadal ah kaasoo buuxiya shuruudaha shabakada korontada ee korantada marka la eego inverterka ku xiran shabakada kadibna si toos ah ugu xiran shabakada dadweynaha. Nidaamyada dhalinta korontada ee ku xiran shabakadda waxay leeyihiin xarumo waaweyn oo koronto ku xiran, oo guud ahaan ah saldhigyo heer qaran ah. Muuqaalka ugu muhiimsan ayaa ah in tamarta la soo saaray ay si toos ah ugu gudbiso shabakadda, isla markaana shabakaddu si isku mid ah loogu hawlgeliyo si ay awood ugu siiso dadka isticmaala. Si kastaba ha noqotee, xarunta korantada ee noocan ahi waxay leedahay maalgashi ballaadhan, muddo dhisme oo dheer, iyo dhul ballaadhan, wax badan oo horumar ahna ma samayn. Nidaamka dhalinta korontada ku xiran ee korontada ku xiran ee loo qeybiyay, gaar ahaan nidaamka isku dhafka korontada isku dhafan, waa midka guud ee dhalinta korontada ku xiran shabakada taasoo ay ugu wacan tahay faa iidooyinka maalgashi yar, dhismo dhakhso leh, raad yar, iyo taageero siyaasadeed oo ballaaran.
3. Nidaamka dhalinta korontada ee loo qeybiyey, sidoo kale loo yaqaan koronto baahinta baahinta ama bixinta tamarta la qaybiyey, waxaa loola jeedaa qaabeynta qaabab yar oo koronto lagu soo bandhigayo goobta isticmaalaha ama ku dhow goobta isticmaalka awoodda si loo daboolo baahiyaha isticmaalayaasha gaarka ah loona taageero network qeybinta jira hawlgal dhaqaale, ama buuxiso shuruudaha labadan dhinac isla waqti isku mid ah.
Hore: Abs casing 2000 + wareegyada nolosha lithium ion batari 12V 100Ah oo leh BMS
Xiga: Cabbir yar oo miisaan fudud 6V 10Ah Lifepo4 baakidh batari ah oo leh BMS ku dhex jira